पाँच मन्त्रालयद्वारा पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरण प्रस्तुत, कस्को कति ? — Imandarmedia.com
पाँच मन्त्रालयद्वारा पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरण प्रस्तुत, कस्को कति ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिअन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयहरुले पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरणको प्रस्तुत गरेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेल, सदस्यहरु डा कृष्णप्रसाद ओली, डा दिलबहादुर गुरुङ, डा उषा झा, मीनबहादुर शाही, डा रामकुमार फुयाँल, सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार बैठक आगामी मङ्सिर २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।